Voifiraisana : “Hiteraka korontana ny fanitsiana lalàmpanorenana” | NewsMada
Voifiraisana : “Hiteraka korontana ny fanitsiana lalàmpanorenana”
Mbola adihevitra be ny amin’ny fikasan’ny fitondrana hanitsy ny lalàmpanorenana.
Hiteraka korontana izany amin’izao, raha ny fijerin’ny filoha nasionalin’ny firaisamonina sivily Voifiraisana/ PFNOSCM.
“Inona moa no tokony hovaina amin’ny lalàmpanorenana? Tsy mahita aloha izahay. Tokony hiala amin’ ny fe-potoana voalazan’ny lalàmpanorenana ny filoham-pirenena, raha ohatra ka hirotsa-kofidina izy. Ara-dalàna izany. Izay tokony hitondra ny fanjakana no mitondra, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana. Izay ihany.“
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny firaisamonina sivily Voifiraisana/ PFNOSCM, Ndriandahy Mahamoudou, manoloana ny fikasan’ny fitondrana hanitsy ny lalàmpanorenana. Raha misy tokony hahitsy na hovaina ao anatin’ny lalàmpanorenana, tokony ho vita alohan’ny fampihavanam-pirenena izany.
Mila tafapetraka avokoa ny fanavaozana ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Miainga amin’izay no hanorenana lalàmpanorenana vaovao. Izay no atao hoe fanorenana ifotony ny Repoblika. Ahoana, ohatra, no hahazoana mampihatra araka ny tokony ho izy ny zon’olombelona amin’ny lafiny rehetra?
Be dia be ny zavatra tsy mandeha amin’ny laoniny, ny kolikoly… Tokony hapetraka mazava amin’ny fanitsiana ny fomba fitantanana eto Madagasikara ireny rehetra ireny. Ny dikan’izay, tsy tokony hihazakazahana ny fanovana lalàmpanorenana, fa mety hiteraka korontana.
Ny filoha manaraka eo no tokony hanitsy ny lalàmpanorenana
“Tokony amin’ny fe-potoam-piasan’ny filoham-pirenena manaraka eo no hametrahana an’izay lalàmpanorenan vaovao izay“, hoy izy. Be dia be ny zavatra nifangaro, nahatonga ny fampihavanam-pirenena tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy. Tamin’izao fe-potoam-piasana izao, taorian’ny krizy, no tokony ho namitana izay rehetra izay. Tokony ho talohan’ny fifidianana, taona 2013, no natao ny fanovana ny lalàmpanorenana.
Raha nandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny fiainam-pirenena, tokony ho vita tao anatin’izao fe-potoam-piasana izao izany rehetra izany. Noho ny antony samihafa, tsy voatery hoe miankina amin’ny fitondram- panjakana ihany: nanao ny nataony ny mpanohitra; ny mpitondra, tsy nanaja ny lalàmpanorenana. Hatramin’ izao, tsy tafapetraka, ohatra, ny Fitsarana avo (HCJ).